Gabar Aabaheed Injir ku tilmaamtay iyo Soomaalida qaarkeed oo Af Soomaaliga si qaldan ugu dhawaaqo (Daawo Muuqaal ahaan Barnaamish aad u Qosol badan) !! - iftineducation.com
iftineducation.com – Sanadihii ugu dambeeyay Luuqada afkeena hooyo ee Af Soomaaliga waxaa ku soo badanayay Hadalo cusub oo siyaabo kala duwan loo fasirtay kuwaas oo inta badan ay isticmaalaan Dhalinyarada Soomaaliyeed.Gabar ama inan ayaa Aabaheed waxeey ku tiri sidatan ” Aabe ma la socotaa halka aad adiga iyo Injirta iskaga mid tihiin ? “
Aabihii wuxuu yiri Sheeko miyaad biloowday waa maxay Injirta aad ila meel dhigtay? Gabadhii oo Qosleeysa ayaa tiri kama wado xumaan ee Aabe labadiinaba Madaxa ayaad ii saaran tihiin !! (Yaab).
Qaar ka mid ah Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa Luuqada Soomaaliga u isticmaala erayo cusub kuwaas oo mararka qaar ay isku fahmi waayaan dadka waa weeyn ee ku dhegan erayadii hore ee Afka Soomaaliyeed.Mararka qaar Dhalinyarada iyaga oo wax amaanaya ayaa hadane waxeey la kulmaan cadaadis uga yimaada dhanka Waalidiinta.
Gabadh Sucuudiga uga qayb gashay ciyaarta Olombikada oo guuldarro iyo Aflagaaddo la isugu daray(Daawo Sawirada)